ကျေးဇူးတင်စကားကို တော်ရုံမပြောဖြစ်ဖူး – Live the Dream
“ ကျနော်ကကျေးဇူးတင်စကားကို တော်ရုံမပြောဖြစ်ဖူးဗျ။ ပြီးတော့အဲ့တာကျနော်တစ်ယောက်တည်း လားဆိုတာ သံသယရှိမိတယ် ”
တကယ်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆိုတဲ့စကားက ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူကြိုက်နည်းပြီး အသုံးပြုမှု နည်းလာတဲ့စကား လို့တောင်ယုံရတော့မလိုလို ဖြစ်လာတယ်ဗျ။ “ကျေးဇူးတင်ပါတယ်”ဆိုတဲ့စကားက အခြေအနေအားလုံး နီးပါးတိုင်းမှာသင့်လျော်ပြီး ကျနော်တို့တစ်နေ့တာ ပြောသမျှ တွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ့်အပြင် ကျနော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်လည်း “ကျေးဇူးတင်ပါတယ် “ဆိုတဲ့စကားက အလွန်ပဲ ကျက်သရေရှိလှတဲ့စကား ဆိုတာ ကျနော်တို့အားလုံး အသိပဲဟုတ်
ဒါပေမယ့် သင့်ကိုယ်သင် ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပါအုံး…… “သင်ဒီနေ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လို့ဘယ်နှစ်ခေါက် များပြောပြီးပြီလဲ…………” ဒီစာရေးနေရင်း ကျနော့်ကိုယ်ကျနော်လည်း ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ဗျ ကျနော်လည်းဒီနေ့ကျေးဇူးတင်စကားမပြောဖြစ်သေးဘူး…..
ဟုတ်ပါတယ် ကျနော်တို့ဟာတစ်စုံ တစ်ယောက်ကိုကျေးဇူးတင်ဖို့မေ့နေကြတယ်..ကျနော်တို့ချစ်တဲ့
သူတွေကိုကျေးဇူးတင်ဖို့မေ့နေကြတယ် ကျနော်တို့မုန်းတဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးတင်ဖို့မေ့နေကြတယ်.. မုန်းတဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်? စာရေးသူကတော့ပေါက်ကရ လျှောက်ရေးပြီ သင်ထင်မှာပေါ့…ကျနော်ပေါ့ ကျနော်ပေါက်ကရလျှောက်ရေးတာမဟုတ်ရပါဘူးဗျ။….…ဟုတ်ပါပြီ.သင်ကကျေးဇူးလည်းတင်ခြင်ပါရဲ့ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ ကျေးဇူးတင်ခြင်လည်းဆိုတာရောသိရဲ့လား….တကယ်တော့သင်သိပါတယ်ဗျ။
ဒီဆောင်းပါးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုအထက်မှာဖတ်ပြီးလောက်ရောပေါ့(life hack) တကယ်လို့သင်ဟာဘဝကို game တစ်ခုလိုယူဆထားသူတစ်ယောက်ဆိုရင် အချို့နေရာတွေမှာ လွယ်ကူသွားအောင် hack ပြစ်လိုက်ဖို့လိုတယ်ဗျ။ကျနော်တို့ game တွေကို hack ပြီးဆော့ကြသလိုပေါ့။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူရှိသွားအောင်ပေါ့။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ ဘဝကို ဘယ်လိုကျေးဇူးတင်ရင်း hack မလဲဆိုတဲ့ tips တွေပြောပြပေးသွားမှာ ဖြစ်တယ်ဗျ။ အဲံ့တော့….ဘယ်လို hack ကြမလဲ??….ဖတ်ကြည့်သွားပါအုန်းဗျ။
“ များသောအားဖြင့်ကျနော်တို့ဟာ ချီးကျူးခံရမှုတွေကို မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ တန်ဖိုးကိုလျှော့ချလိုက်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်……ဘာလို့ဆိုကျနော်တို့က မာနာကြီးတယ်၊ စိတ်ကြီးဝင်တယ်လို့ အထင်မခံခြင်ကြလို့်ပဲ…..”
တကယ်တော့သင့်ရဲ့အတွေးတွေက စစ်မှန်တဲ့ချီးကျူးမှုတစ်ခုကို လွဲသွားစေတယ်ဆိုတာပါပဲ….
အကယ်လို့ သင်က ”ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” လို့သာ ပြန်ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင် ချီးကျူးတဲ့သူကိုလည်းအသိမှတ်ပြု ရာရောက်ပြီး သင် ကြည်နူးဖွယ်အချိန်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ရမှာပါ။….ဥပမာအားဖြင့်..သင့်သူငယ်ချင်း
“ဟုတ်လား..ဒီဟာကဟောင်းနေပြီမဟုတ်ဘူးလား၊ ငါလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တည်းကဝယ်ခဲ့တာ” လို့ဖြေမယ့်အစား
“ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ နင်ကြိုက်လို့ဝမ်းသာပါတယ် “ ဆိုတာမျိုး
မင်းဒီနေ့ presentation လုပ်တာလုပ်တာကောင်းလိုက်တာလို့ပြောခဲ့ရင်
“ဟုတ်လို့လားဟယ်၊ ငါစင်ပေါ်မှာတကယ်ကြောက်နေခဲ့တာ၊ ခေါင်းကိုမူးနေတာပဲ” လို့ပြောမဲံ့အစား
“ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဟယ်၊ ကောင်းကောင်းလေးပြီးသွားလို့တော်သေးတယ်” ဆိုတာမျိုးကသင့်ကိုပို
ပြီး sociable(ဖော်ရွေသူ) တစ်ယောက်အသွင်ပေါ်စေပါတယ်……..
(၂) သင်နောက်ကျတဲ့အခါ ကျေးဇူးတင်စကားပြောပါ
တကယ်တော့နောက်ကျတယ်ဆိုတာ အဆိုးဆုံးပါ။ နောက်ကျတဲ့သူအတွက်လည်း စိတ်ပင်ပန်းရသလို စောင့်နေရတဲ့သူကိုလည်း မလေးစားရာကျ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ စောင့်နေရတဲ့သူကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောရမယ်ဆိုတာကြီးက နဲနဲတော့ ထူးဆန်းတယ်
ဟုတ်.. ဒါပေမဲ့ အဲ့တာက တကယ့်ကို အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ။ များသောအားဖြင့်ကျနော်တို့က အခန်း
တံခါးကိုဖွင့်ပြီး “ကျနော်နောက်ကျသွားလို့ တောင်းပန်ပါတယ်” လို့ပြောကြတယ်ဟုတ်။ အဲ့အစား “စောင့်နေပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” လို့ပြောမယ်ဆိုရင် တစ်ဖက်သူကို စိတ်ခြမ်းသာစေပြီး့Respect ထားရာလည်းရောက်ပါတယ်ဗျ။ ဒါပေမဲ့ သင့် boss ကိုတော့စောင့်နေပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သွားမလုပ်နဲ့ဗျ…..ကားပိတ်ရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုစောစောသွား….တော်ကြာလစာတွေဖျက်ခံထိမှ…..ဟင်းဟင်း……
ကျွန်တော်တို့ဆီကို တစ်စုံတစ်ယောက်က သတင်းဆိုးတွေနဲ့လာတယ်ဆိုတာ တကယ့်ကိုစိတ်ညစ်စရာ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲနော်….ဥပမာ သင့်သူငယ်ချင်းအမေ ကွယ်လွန်သွားတာတို့၊ အလုပ်ကထုတ်ခံရတာတို့ဆိုတာ အတော်စိတ်မချမ်းမြေ့စရာဖြစ်ပြီး သင်ကိုယ်တိုင်လည်း ဘယ်လိုနှစ်သိမ့်ပေးရမလဲမသိ ဖြစ်ဖူးတယ်ဟုတ်…. အဲ့လိုအချိန်မှာ များသောအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ပြောမိတတ်ကြတာက တခြားပျော်စရာတွေ ရှိသေးပါတယ်တို့၊ အဲ့ခံစားချက်ငါနားလည်ပါတယ်တို့ တစ်ခါတစ်လေ ဘာပြောရမှန်း မသိဖြစ်တတ်ကြတယ်ဟုတ်… တကယ်တော့ကျနော်တို့ မသိကြတာက သင်ဘာပြောရမှန်းမသိလဲ ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆို တာပါပဲ.. “င့ါကိုယုံကြည်ပြီးရင်ဖွင့်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဥပမာ သင့်သူငယ်ချင်းက အလုပ်ပြုတ်သွားတယ်ကွာ လို့ရင်ဖွင့်ခဲ့ရင်
“ငါတကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးကွာ နောက်အလုပ်တွေရှိသေးပါတယ်” လို့နှစ်သိမ့်မယ့်အစား
“ငါ့ကိုမင်းရင်ဖွင့်လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာ ငါလည်မင်းကိုကူညီပေးမှာပေါ့” ဆိုတာမျိုးက သင့်သူငယ်ချင်းအတွက်အကောင်းဆုံး နှစ်သိမ့်စကား ဖြစ်စေမှာပါ……
(၄) တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကို feedback ပေးတဲ့အခါမှာလည်း ကျေးဇူးတင်စကားပြောပါ
Feedback တွေက တစ်ကယ့်ကို အကူအညီ ဖြစ်စေပါတယ် ဒါပေမဲ့ အဲ့တိုင်းမြင်ဖို့တော့ ခဲယဉ်းလှပါတယ်။ သင့်သူဋေးက သင့်လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး feedback ပေးတာပဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ သင့် customer တစ်ယောက်ယောက်ဆီက အဆင်မပြေတဲ့ feedback ရတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ် များသောအားဖြင့်ကျနော်တို့ တုံ့ပြန်မိကြတာကတော့(Defensive) ခုခံပြောဆိုခြင်းတွေပါပဲ။ သင်လည်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ဆိုင်မှာစားလို့ waiter ကို အဆင်မပြေတာတွေ ရှင်းပြတဲ့အခါ waiter ကခုခံပြောဆိုနေရင် သင်လည်းစိတ်တိုမိမှာပါပဲ။ တကယ်တော့အဲ့လို တုံ့ပြန်မှုတွေက ရှက်စရာပါပဲဗျ။ ဘာလို့ဆို မှန်ကန်တဲ့ တုံံံံ့ပြန်ခြင်းက ကျေးဇူးတင်ခြင်းဖြစ်နေလို့ပါ။
ဥပမာ မင်းဒီတစ်ခါ လုပ်ထားတာသိပ်မကောင်းဘူးကွာ.. မင်းဒီထက် ပိုကောင်းအောင်လုပ်သင့်တယ်လို့ feedback ပေးလာခဲ့ရင်
“မင်းနားမလည်ပါဘူးကွာ.. ငါဘယ်လိုလုပ်ထားရတယ်ဆိုတာတောင်မင်းမသိပဲနဲ့” လို့ပြောမယ့်အစား
ဘဝမှာလူရယ်လို့ ဖြစ်လာမှတော့ လူမျိုးစုံနဲ့တွေ့ရမှာပဲဗျ။ အဲ့ထဲကတချို့လူတွေက ကျနော်တို့ကို ကူညီသယောင်ယောင်နဲ့ လာပုပ်ခတ်ကြ သူတွေလည်းတွေ့ရနိုင်ပါတယျျျ်(blame) တယ်ပေါ့။ ကျနော်တို့ဟာအသိဉာဏ်ရှိလူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်စုံတစ်ယောက်က ဘယ်လိုသဘောမျိုနဲ့ ပြောလဲဆိုတာခံစားသိရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲ့တော့ မနှစ်မျို့စရာ feedback တစ်စုံတစ်ရာများပေးလာသူရှိရင်ထိုသူကို ကျေးဇူူးသာတင်ပေးလိုက်ပါ။ တစ်ခါတလေမှာ ဘဝကို အကြောတင်းတင်းနဲ့ဖြတ်သန်းကြရပါမယ်။ အထူးသဖြင့်သင့်ကိုမုန်းတဲ့သူတွေကြားမှာပေါ့။ ဒါဟာလည်း life hack တစ်မျိုးပါပဲ။ သင့်စိတ်ဓာတ်တွေ ပိုပြီးမာကြောလာရပါမယ်။
(၅) တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ကျေးဇူးတင်ရမလား မသေချာတဲ့အခါ ကျေးဇူးတင်စကားပြောပါ
သင်သံသယရှိတဲ့အခါမှာ ကျေးဇူးတင်စကားပြောလိုက်ပါ။ ကျေးဇူးတင်လို့ အောက်ကျတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူးဗျ။ သင့်ရဲ့ဘဝမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို နှစ်နှစ်ကာကာကျေးဇူးတင်ဖို့ စိုးရိမ်ခဲ့ဖူးလား။ကျနော်တို့ နေထိုင်တဲ့ဘဝကြီးက တိုတောင်းလွန်းပါတယ်။ သင်ဒီနေ့တွေ့လိုက်ရတဲ့သူက မနက်ဖန်မှာ တသက်လုံးမတွေ့ရတော့မယ့်သူ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုကျေးဇူးမတင်လိုက်ရလို့ တသက်လုံးနောင်တရနေရမယ့်အဖြစ်မျိုး သင်မကြုံရအောင် ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။
“သူငယ်ချင်းကိုကျေးဇူးတင်တဲ့ message လေးပို့ရမလား?” အခုပဲပို့လိုက်ပါ။
မနေ့ကထက်ပိုပြီးကျေးဇူးတင်ပေးလိုက်ပါ။ သင့်နေ့စဉ်ဘဝတွေ ပိုအဓိပ္ပါယ်ရှိလာမှာပါ။